अब कुन दल कत्रो? स्थानीय तह नेतृत्व : एमाले ४५, कांग्रेस ३४.१७ प्रतिशत - inaruwaonline.com
अब कुन दल कत्रो? स्थानीय तह नेतृत्व : एमाले ४५, कांग्रेस ३४.१७ प्रतिशत
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ११, २०७४ समय: ३:४९:३९
काठमाण्डाै । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा बढी स्थान जितेर पहिलो बनेको नेकपा एमालेले समग्रमै स्थानीय तहको सम्पूर्ण पदको ४५ प्रतिशत हिस्सा जित्न सफल भएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थानीय तहको सम्पूर्ण पदमा एमालेले अन्य दललाई उछिनेको छ।
राप्रपाले नगर प्रमुख १, उपप्रमुख, ३, अध्यक्ष ४, उपाध्यक्ष ४, वडाध्यक्ष ५३, वडासदस्य ९७, महिला सदस्य ५० र दलित महिला सदस्य ४५ समेत गरी कुल २ सय ५७ सिट जितेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गाउँपालिका अध्यक्ष ३ र उपाध्यक्ष ४ सहित १८६, नेमकिपाले १ प्रमुख र १ उपप्रमुखसहित ९९ स्थान जितेका छन्।
त्यस्तै, बहुजन शक्ति पार्टीले ७ वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ३७, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले वडाध्यक्ष १ सहित १२, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले १ वडाध्यक्षसहित ७, नेकपा मालेले १ वडाध्यक्षसहित ४, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले २ महिला सदस्य र नेपाल परिवार दलले १ दलित महिला सदस्य जितेका छन्। ७४४ स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पद संख्या ३४ हजार ९ सय ८ छन्। प्रदेश २ को ८ जिल्लाका १ सय २७ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन बाँकी छ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।